ဒီမိုကရစေီယန်တရား လညျပတျမှုနှငျ့ စီးပှားရေးအမွငျ – Federal Journal
ဒီမိုကရစေီယန်တရား လညျပတျမှုနှငျ့ စီးပှားရေးအမွငျ
စီးပှားရေးညီမြှမှုမရှိရငျ ဒီမိုကရစေီကငျြ့သုံးဖို့ အဆငျပွပေါ့မလား
ဒီလို မေးခှနျးမြိုးက ‘အငျး’ ဒါမှမဟုတျ ‘ဟငျ့အငျး’လို့ တဈလုံးတညျး တိုတိုပွတျပွတျ ဖွလေိုကျလို့ ရတာမြိုး မဟုတျပါဘူး။ အတိုငျးအတာနဲ့ ခငျြ့တှကျပွီး ဖွရေမယျ့ မေးခှနျးမြိုးပါ။
လူ့အဖှဲ့အစညျးတဈခုမှာ စီးပှားရေးတနျးတူညီမြှမှု နညျးပါးလေ (ဆိုလိုတာက ခမျြးသာတဲ့ သူတှကေ ထားစရာမရှိအောငျ ခမျြးသာပွီး၊ ဆငျးရဲတဲ့သူတှကေ စားစရာမရှိလောကျအောငျ ဆငျးရဲနလေေ) နိုငျငံရေးအရ တနျးတူညီမြှဖွဈတာ နညျးလပေါပဲ။
ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ စီးပှားရေးဓနဥစ်စာ တောငျ့ တငျးတဲ့သူတှကေ သူတို့ရဲ့ ဓနဥစ်စာတှကေို အသုံးခပြွီး နိုငျငံရေးရလဒျတှေ ပွောငျးလဲသှားအောငျ လုပျနိုငျကွ တယျလေ။
တခြို့ အကဲဆတျတဲ့ အခွအေနတှေမှောဆိုရငျ တနငျ့တပိုး ခမျြးသာကွှယျဝတဲ့သူတှကေ ဆငျးရဲ နှမျးပါးတဲ့ မဲဆန်ဒရှငျတှကွေောငျ့ သူတို့အကြိုးစီးပှား တှေ ပကျြလိုပကျြစီးဖွဈမှာ စိုးရိမျတတျကွတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲတှေ မအောငျမွငျအောငျ၊ ရှေးကောကျပှဲရလဒျတှေ မမှနျမကနျဖွဈအောငျ၊ ရှေးကောကျပှဲဖွဈစဉျကို သေးသိမျနိမျ့ကအြောငျ လုပျ လာတတျကွတယျ။
နောကျတဈဖကျမှာကတြော့လညျး ဆငျးရဲ နှမျးပါးတဲ့သူတှကေ သူတို့ဘဝတှေ ခြောငျလညျပွီး ဘဝတကျလမျး ဖွောငျ့တနျးမယျ့ အလားအလာမြိုး ကွုံဖို့ ဒီမိုကရစေီနညျးကို အားကိုးလို့ရပါ့မလားဆိုပွီး သံသယတှေ ဝငျလာတတျကွတယျ။ ဒီမိုကရစေီ အားကိုးတော့လညျး ကိုယျ့ထမငျးတော့ ကိုယျရှာစားရ တာပဲ ဘာမြားထူးလို့လဲဆိုပွီး ဒီမိုကရစေီဘကျက ရပျတညျအားပေးမှုတှေ ကဆြငျးလာတယျ။ ဒီလိုဖွဈ လာရငျ ဒီမိုကရစေီရဲ့ ‘အရညျအသှေး’ ကဆြငျးလာ နိုငျတဲ့အပွငျ ဒီမိုကရစေီရဲ့ ‘အရှညျတညျတံ့ရေး’ ကလညျး ရတကျမအေးစရာ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ဒီတော့ ဒီမိုကရစေီနဲ့ ဈေးကှကျစီးပှားရေးကို ကငျြ့သုံးတဲ့အခါ အတိုငျးအတာတဈခုအထိ စီးပှားရေး တနျးတူညီမြှမှုရှိဖို့ မလှဲသာ မရှောငျသာ ဆောငျရှကျဖို့ လိုတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဒီမိုကရစေီကို ထိခိုကျလာနိုငျ လောကျတဲ့ စီးပှားရေးမညီမြှမှုတှကေို အနညျးဆုံး လြှော့ခဖြို့လိုတယျလို့ ဒီမိုကရကျတှကေ စိတျအား ထကျသနျတတျကွပါတယျ။
“ဒီအတှကျ နညျးလမျးတဈခုကတော့ ရှေး ကောကျပှဲမှာ ဝငျပွိုငျတဲ့ နိုငျငံရေးပါတီတိုငျး၊ ကိုယျစား လှယျလောငျးတိုငျးက သူတို့ရဲ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး အသုံးစရိတျတှကေို အလှနျအကြှံသုံးလို့မရအောငျ ဘယျလောကျထကျ ပိုမသုံးရဘူးလို့ တဈပွေးညီ သတျ မှတျပေးလိုကျလို့ ရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မီဒီယာတှမှော မြှမြှတတ ဖျောပွခံရဖို့နဲ့ နိုငျငံရေးပါတီတှရေဲ့ ရနျပုံငှေ တှေ ဘယျသူ့ဆီက ဘယျလောကျယူထားတယျဆိုတာ ဖှငျ့ခဖြျောပွဖို့ လိုပါတယျ။
“ဒီလိုမှမဟုတျဘူးဆိုရငျလညျး နောကျထပျနညျး လမျးတဈခု ရှိပါသေးတယျ။ အဲဒါကတော့ ဆငျးရဲ ခမျြးသာမရှေး နိုငျငံသားတိုငျးအတှကျ ဘဝရဲ့ အခွခေံ အကဆြုံး လိုအပျခကျြတှကေို တနျးတူညီမြှ ရရှိနိုငျကွ အောငျ စီမံပေးဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပညာရေး၊ ကနျြးမာ ရေးတှေ စောငျ့ရှောကျပံ့ပိုးမှုတှကေို နိုငျငံသားတိုငျး ရရှိနိုငျကွအောငျ ဆောငျရှကျပေးရငျ နိုငျငံသားတိုငျး ဟာ စီးပှားရေးလောက၊ လူမှုလောကတှမှော တနျးတူ ညီမြှ ပါဝငျနိုငျလာကွမှပါ။ မြှမြှတတ ယှဉျပွိုငျနိုငျကွ လာမှာပါ။
ဒီလို အစီအမံတှေ မရှိဘဲနဲ့ဆိုရငျ ပညာမတတျလို့၊ မကနျြးမာ မသနျစှမျးလို့ စတဲ့အကွောငျးတှကွေောငျ့ စီးပှားရေးမှာ တနျးတူညီမြှ မယှဉျပွိုငျနိုငျတာတှေ ပိုကွီးမားလာနိုငျပါတယျ။ (ဒီစပျဆကျမှုနဲ့ ပတျသကျလို့ မေးခှနျးနံပါတျ (၂၂) မှာ – စီးပှားရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ ယဉျကြေးမှု အခှငျ့အရေးတှကေရော ဒီမိုကရစေီနဲ့ ဘယျလို စပျဆကျသလဲဆိုတာ ဆှေးနှေးခဲ့ပါသေး တယျ။ ဒီလငျ့ချမှာ http://bit.ly/30FyTyI ဖတျရှု နိုငျပါတယျ။)
ဒီတဈပတျ တငျဆကျဆှေးနှေးမှုကတော့ ဒီလောကျပါပဲ။ ဆှေးနှေးခဲ့တာတှကေို အနှဈခြုပျ ပွနျ တငျပွရရငျတော့ ….
စီးပှားရေးတနျးတူညီမြှမှုနညျးရငျ နိုငျငံရေးအရ လညျး တနျးတူညီမြှမှု နညျးနိုငျပါတယျ။
စီးပှားရေးမှာ မညီမြှမှုကွီးမားလာတဲ့အခါ ခမျြးသာတဲ့သူတှကေ သူတို့ရဲ့ အကြိုးစီးပှားတှေ ကို မထိခိုကျအောငျ ကာကှယျဖို့ ငှအေားကို သုံး နိုငျလာကွသလို၊ ဆငျးရဲနှမျးပါးသူတှကေ ဒီမို ကရစေီကို ယုံကွညျအားကိုးမှု လြော့နညျးလာ တတျပါတယျ။
စီးပှားရေးမညီမှုကွောငျ့ ဒီမိုကရစေီမထိခိုကျဖို့ ဆိုရငျ ‘ရှေးကောကျပှဲတှမှော ယှဉျပွိုငျမှုကို ညီမြှ အောငျ လုပျတာ’ နိုငျငံသားတှအေတှကျ အခွခေံ အကဆြုံး လိုအပျခကျြတှကေို ဖွညျ့ဆညျးပေးတာ တှနေဲ့ ဖွရှေငျးတတျကွတယျ … စတာတှပေါပဲ။
ဒီမိုကရစေီ ဖွဈထှနျးတညျမွဲဖို့ စီးပှားရေးတိုးတကျမှုပျေါ မူတညျသလား
စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျတဲ့ နိုငျငံတှကေတော့ ဒီမိုကရစေီနိုငျငံအဖွဈ ကူးပွောငျးပွီးခါမှ ခွခြေျော လကျခြျောနဲ့ အာဏာရှငျအုပျခြုပျမှုအောကျ ပွနျ ရောကျသှားတာမြိုး သိပျဖွဈလမေ့ရှိပါဘူး။ ဘာဖွဈ လို့လဲဆိုတော့ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာတာနဲ့အမြှ နိုငျငံသားတှရေဲ့ အရညျအခငျြးနဲ့ အမူအကငျြ့ကောငျး တှရှေိလာပွီး၊ အရပျသား လူ့အဖှဲ့အစညျးကိုလညျး ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ ဖှဲ့စညျးထူထောငျထားနိုငျလာ ကွလို့ပါပဲ။
နိုငျငံတဈခုမှာ လူတှအေားလုံးက စာတတျ ပတေတျ၊ ပညာတတျကွမယျဆိုရငျ အဲဒီနိုငျငံသား တှဟော အကွားအမွငျမြား၊ သိမွငျနှံ့စပျပွီးတော့ တညျတညျကွညျကွညျနဲ့ မဲပေးနိုငျစှမျးရှိတဲ့သူတှေ ဖွဈလာမှာပါ။ နောကျတဈခကျြက နညျးပညာနဲ့ သကျမှေးဝမျးကြောငျး ကြှမျးကငျြမှုအမြိုးမြိုးနဲ့ လုပျ ကိုငျနကွေတဲ့ လူလတျတနျးလှာတှမြေားတဲ့ နိုငျငံတှေ ဆိုရငျလညျး သူတို့ဟာ အာဏာရှငျဆနျတဲ့၊ ခြုပျခယျြ တတျတဲ့ အစိုးရတှကေို သညျးခံနကွေမှာ မဟုတျပါ ဘူး။
စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျတဲ့ နိုငျငံတှမှော လူတှဟော ကိုယျ့အစုအဖှဲ့နဲ့ကိုယျ တူရာတူရာ စုဖှဲ့လို့ အရပျသားအဖှဲ့အစညျးတှအေဖွဈ လုပျကိုငျကွတာ တှေ တှငျကယျြလာနိုငျပါတယျ။ ဒီလို စုဖှဲ့ထားတဲ့ အရပျသားအဖှဲ့အစညျးတှေ အားကောငျးလေ၊ အစိုးရ က ဟိုနရောစှကျဖကျ ဒီနရောဟနျ့တား လုပျတာတှေ ကို ကာကှယျပွီး ကိုယျ့အခှငျ့အရေးဘကျက ကိုယျရပျ တညျနိုငျလာကွပါတယျ။
ဒါတှကေိုဖတျမိတော့ စာရှုသူအနနေဲ့ ဒီမိုကရစေီ ထူထောငျနိုငျဖို့၊ ဒီမိုကရစေီ တညျတံ့ဖို့ဆိုရငျ နိုငျငံက စီးပှားရေးတိုးတကျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှသာ ဖွဈနိုငျမှာပဲ လို့ ထငျမှာပါပဲ။ ဒီလိုတော့ ကောကျခကျြခြ မစောလိုကျ ပါနဲ့ဦး။
တကယျတော့ စီးပှားရေးမကောငျးလှပမေယျ့ ဆယျစုနှဈတှခြေီပွီး ဒီမိုကရစေီနညျးကြ ရှေးကောကျပှဲ တှကေို မပကျြမကှကျ ကငျြးပခဲ့တဲ့၊ ဒီမိုကရစေီအတှကျ ဇှဲကောငျးခဲ့တဲ့ နိုငျငံတှလေညျး ကမ်ဘာ့ကုနျးမွတေိုကျ ကွီးတှတေိုငျးမှာ ရှိကွပါတယျ။ ဥပမာ – အိန်ဒိယနိုငျငံ၊ ဂြာမကောနိုငျငံနဲ့ ဘော့ဈဝါနာ နိုငျငံတှပေေါ့။ (နိုငျငံ တဈနိုငျငံကို စီးပှားရေးကောငျးမကောငျး တိုငျးတာ တဲ့အခါမှာ အခြို့ပညာရှငျတှကေ GDP လို့ချေါတဲ့ ပွညျတှငျး အသားတငျထုတျလုပျမှု ညှနျးကိနျးကို သုံးကွပွီး၊ အခြို့ကတော့ GNP လို့ချေါတဲ့ အမြိုးသား အသားတငျထုတျလုပျမှု ညှနျးကိနျးကို သုံးကွပါတယျ။)
တကယျတော့ ဒီမိုကရစေီကို ထူထောငျဖို့၊ တညျမွဲစဖေို့ဆိုရငျ အစိုးရတှအေနနေဲ့ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစမေယျ့ မူဝါဒတှအေပွငျ နိုငျငံသား တှရေဲ့ ပညာတတျမှုနှုနျး မွငျ့မားလာဖို့ မူဝါဒတှေ ခမြှတျဖို့ကလညျး ပိုလို့တောငျ အရေးကွီးတာပါပဲ။
နဂိုထဲက ခမျြးသာတဲ့ နိုငျငံပဲဖွဈဖွဈ၊ ဆငျးရဲတဲ့ နိုငျငံမြိုးပဲဖွဈဖွဈ အတောငျပံဖွနျ့စ အပြံသငျစ ဒီမို ကရစေီနိုငျငံတှအေတှကျကတော့ ရရှေညျမှာ စီးပှား ရေးကို ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျအောငျ လုပျကွရမှာပါ။ စီးပှား ရေးက ဝုနျးဒိုငျးကြဲ မတကျပမေယျ့လို့ တိုးတကျမှု ခပျမှနျမှနျလေးရှိတယျဆိုရငျတောငျ လူ့အဖှဲ့အစညျး ထဲမှာ အဆငျပွတေဲ့သူက အဆငျမပွတေဲ့သူကို သူတဈ လှညျ့ ကိုယျတဈပွနျ စောငျ့ရှောကျသှားလို့ ရပါတယျ။ ပွီးတော့ စီးပှားရေး တိုးတကျဖှံ့ဖွိုးလာတဲ့အခါ ပဋိပက်ခဖွဈတာတှေ၊ အခငျြးခငျြး သူ့ရနျလုပျ ကိုယျ့ ရနျလုပျ လုပျကွတာတှလေညျး နညျးသှားပါတယျ။
နိုငျငံတဈခုဟာ စီးပှားရေးတိုးတကျမှု ရှိမရှိ ဆိုတာကို ဒီမိုကရစေီ ထှနျးကားပွီးသား နိုငျငံကွီး တှနေဲ့ နိုငျငံတကာ စီးပှားရေး လုပျငနျး/အဖှဲ့အစညျး တှကေ နိုငျငံရဲ့ ဝငျငှနေဲ့ စီးပှားရေး ညှနျးကိနျးလို အရေ အတှကျတှကေိုပဲ ကွညျ့ပွီးတော့ အကဲဖွတျ တတျ ကွပါတယျ။ ဒီလို အကဲဖွတျတဲ့ မူဝါဒတှကွေောငျ့ အကူအညီ ပေးနိုငျလာတာ မြိုး ရှိသလို၊ တခွားဘကျမှာ တော့ အဟနျ့အတား အကနျ့အသတျ ဖွဈတတျတာတှေ လညျး ရှိပါတယျ။
အခုခတျေကာလမှာတော့ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုး တကျမှု ရှိမရှိ သိနိုငျဖို့အတှကျ ကိနျးဂဏနျးတှကေိုခညျြး ကွညျ့လို့မရဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ လကျခံလာကွပါပွီ။ နိုငျငံတဈနိုငျငံဟာ စီးပှားရေး ကဏ်ဍ ဝငျငှပေမာဏကိုတညျ၊ အဲဒီနိုငျငံက လူဦးရေ ပမာဏနဲ့ စားဆိုပွီး အလှယျတှကျလို့ ရတဲ့ကိစ်စ မဟုတျပါဘူး။ စီးပှားရေးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ကိနျးဂဏနျး တှေ၊ ညှနျးကိနျးတှကေိုခညျြး ကွညျ့တာကို အရအေတှကျ ရှုထောငျ့က သုံးသပျတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
နိုငျငံတဈနိုငျငံမှာ စီးပှားရေးတိုးတကျမှု ရှိမရှိ သိနိုငျဖို့ဆိုရငျ နိုငျငံသားတှဟော ကောငျးကောငျး မှနျမှနျ နထေိုငျနိုငျကွရဲ့လား၊ ကနျြးကနျြးမာမာ ရှိကွ ရဲ့လား၊ ဝငျငှရေရှိမှုကရော မြှမြှတတရှိကွသလား၊ နိုငျငံတျော(အစိုးရ)ကရော နိုငျငံ့ဝငျငှကေို ကနျြးမာ ရေး၊ ပညာရေးနဲ့ စဈဘကျတှမှော ဘယျလို မြှမြှတတ ခှဲဝအေသုံးပွုသလဲ ဆိုတာတှဟော ထညျ့စဉျးစားရ မယျ့ အခကျြတှေ ပါပဲ။ နိုငျငံ့ဝငျငှဟော နိုငျငံသား တဈဦးခငျြး စီအဆငျ့မှာ မြှမြှတတ ရှိသလို၊ အစိုးရရဲ့ ဘတျဂတျြက မြှမြှတတ ခှဲဝသေုံးစှဲပါမှ စီးပှား ရေး တိုးတကျမှုကလညျး အဓိပ်ပာယျရှိမှာပါပဲ။ ဒါက စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုကို အရအေတှကျအရ မဟုတျဘဲ အရညျအသှေးရှုထောငျ့က တိုငျးတာစိစဈ တာပါ။
ဒီလို အရညျအသှေးရှုထောငျ့ကနေ စီးပှားရေး တိုးတကျမှုကို သုံးသပျကွညျ့ရငျ နိုငျငံတဈခုက အစိုးရ ဟာ ဘယျလို အစိုးရ မြိုးလဲ၊ နိုငျငံသားပွညျသူတှရေဲ့ လိုအပျ ခကျြကို ဘယျလောကျအတိုငျးအတာ ထိ ဂရုတစိုကျရှိသလဲဆိုတာကိုပါ သုံးသပျ နိုငျလာမှာပါ။
ဒီမိုကရစေီကို လိုလားထောကျခံတဲ့ မဲဆန်ဒရှငျမှနျ သမြှ ဆငျးရဲခမျြးသာ ကှာဟမှု ကွီးမားစမေယျ့ (စားစရာမရှိအောငျ ဆငျးရဲတဲ့သူတှနေဲ့ ထားစရာ မရှိအောငျ ခမျြးသာတဲ့သူတှေ ပျေါထှနျးစမေယျ့) အစှနျးရောကျတဲ့ စီးပှားရေးမူဝါဒမြိုး ရှိစခေငျြမှာ မဟုတျပါဘူး။ ပွီးတော့ ဒီမိုကရစေီနိုငျငံတှမှော နိုငျငံ သားတှဟော ပွညျသူ့ဘဏ်ဍာတှကေို ကာကှယျရေးတို့၊ လကျတှလေူ့မှုဘဝမှာ သိပျပွီး အသုံးမတညျ့လှတဲ့ ဝငျ့ဝါမျေွှာကားစရာ ကိစ်စမြိုးတို့မှာ သုံးတာထကျ ကနျြးမာရေး၊ ပညာရေးနဲ့ အခွခေံအဆောကျအအုံ တှအေတှကျ ပိုလို့ သုံးစှဲစခေငျြကွတာပါပဲ။
ထပျပွောရရငျ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးရှိပွီး တာဝနျခံမှု ရှိတဲ့ အစိုးရတှဟော အာဏာရှငျဆနျတဲ့ အစိုးရတှေ ထကျ ပွညျသူ့ဘဏ်ဍာငှကေို ထိထိရောကျရောကျ သုံးစှဲကွပါတယျ။ အစိုးရတဈရပျဟာ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ရှိပွီး တာဝနျခံတယျဆိုရငျ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျ တာတှေ၊ သဘာဝ ပတျဝနျးကငျြ ယိုယှငျးပကျြစီးတာ တှေ၊ မိုးခေါငျရရှေားပွီး စားနပျရိက်ခာ စိုကျပြိုးထုတျ လုပျမှု မပွုနိုငျတာတှေ စတဲ့ ပွဿနာတှကေို နှဈရှညျ လမြား ဖုံးဖိမထားပါဘူး။ ဒီလိုယိုယှငျးမှု အဖုံဖုံကို လကျခံအသိအမှတျပွုပွီး ဘာကွောငျ့ဖွဈရတယျ၊ ဘယျလို ဖွရှေငျးရမယျဆိုတာ ဖျောထုတျ ကိုငျတှယျ ကွမှာပါပဲ။ ဒီနညျးနဲ့ ဒီမိုကရစေီအစိုးရတှကွေောငျ့ တိုငျးပွညျရဲ့ စီးပှားရေး ရရှေညျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု အတှကျ ရရှေညျ အာမခံခကျြ ရရှိစပေါလိမျ့မယျ။
အခုထိ တငျဆကျဆှေးနှေးခဲ့တာကို ပွနျကွညျ့ ရငျ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျတာရငျ ဒီမိုကရစေီ ဖွဈထှနျးတညျတံ့ဖို့ အထောကျအကူပွုသလို၊ ဒီမိုက ရစေီနညျးကြ အစိုးရတှကေို တငျမွှောကျနိုငျလေ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုကို ရရှေညျ အာမခံခကျြ ပေးနိုငျလဖွေဈတာ တှရေ့မှာပါ။
ဒီမိုကရစေီနဲ့ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုဟာ ကောငျးမှနျခြောမှတေဲ့ နှဈလမျးသှား ဆကျဆံရေး ဖွဈပါတယျ။ ဒီမိုကရစေီနဲ့ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု ဒှနျတှဲနပေါမှ နိုငျငံသားတှရေဲ့ အခှငျ့အရေးတှေ၊ ရပိုငျ ခှငျ့တှအေတှကျ စိတျခရြမှာ ဖွဈပါကွောငျး တငျဆကျ ရငျး ဒီတဈပတျတငျဆကျဆှေးနှေးမှုကို အနှဈခြုပျ ရရငျတော့ ….
စီးပှားရေးတိုးတကျမှုရှိတဲ့ နိုငျငံတှမှော နိုငျငံသား တှရေဲ့ အရညျအသှေးနဲ့ အမူအကငျြ့ကောငျးတှေ ကွောငျ့ အာဏာရှငျတှလေကျအောကျ ပွနျ ရောကျသှားဖို့ မလှယျဘူး။
စီးပှားရေး ထူးထူးခွားခွား မကောငျးပမေယျ့ ဒီမိုကရစေီတညျမွဲအောငျ ကွိုးစားခဲ့ကွတဲ့ နိုငျငံတှလေညျး ကမ်ဘာပျေါမှာ သာဓကတှေ ရှိပါ တယျ။ စီးပှားရေးတိုးတကျမှုကို အရအေတှကျ ရှုထောငျ့နဲ့သာမက အရညျအခငျြးရှုထောငျ့ကပါ တိုငျးတာသုံးသပျနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။
ဒီမိုကရစေီကို လိုလားထောကျခံတဲ့ ပွညျသူတှေ ဟာ ဆငျးရဲခမျြးသာ ကှာဟမှု ကွီးမားစမေယျ့ မူဝါဒမြိုးကို မလိုလားဘူး။ နိုငျငံ့ဝငျငှကေို ကနျြး မာရေး၊ ပညာရေး စတာတှမှော အကြိုးရှိရှိ အသုံးခစြခေငျြကွတယျ။
ပှငျ့လငျးပွီး တာဝနျခံမှုရှိတဲ့ အစိုးရတှဟော စီးပှားရေးတိုးတကျဖှံ့ဖွိုးမှုအတှကျ ရှိနတေဲ့ အရငျးခံပွဿနာတှကေို ဖျောထုတျပွီး လူ့အခှငျ့ အရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု ကို ဖျောဆောငျကွတယျ …. စတဲ့အခကျြတှပေါပဲ။
Source by CIVIC Now
ဒီမိုကရေစီယန္တရား လည်ပတ်မှုနှင့် စီးပွားရေးအမြင်
စီးပွားရေးညီမျှမှုမရှိရင် ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးဖို့ အဆင်ပြေပါ့မလား
ဒီလို မေးခွန်းမျိုးက ‘အင်း’ ဒါမှမဟုတ် ‘ဟင့်အင်း’လို့ တစ်လုံးတည်း တိုတိုပြတ်ပြတ် ဖြေလိုက်လို့ ရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အတိုင်းအတာနဲ့ ချင့်တွက်ပြီး ဖြေရမယ့် မေးခွန်းမျိုးပါ။
လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ စီးပွားရေးတန်းတူညီမျှမှု နည်းပါးလေ (ဆိုလိုတာက ချမ်းသာတဲ့ သူတွေက ထားစရာမရှိအောင် ချမ်းသာပြီး၊ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေက စားစရာမရှိလောက်အောင် ဆင်းရဲနေလေ) နိုင်ငံရေးအရ တန်းတူညီမျှဖြစ်တာ နည်းလေပါပဲ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စီးပွားရေးဓနဥစ္စာ တောင့် တင်းတဲ့သူတွေက သူတို့ရဲ့ ဓနဥစ္စာတွေကို အသုံးချပြီး နိုင်ငံရေးရလဒ်တွေ ပြောင်းလဲသွားအောင် လုပ်နိုင်ကြ တယ်လေ။
တချို့ အကဲဆတ်တဲ့ အခြေအနေတွေမှာဆိုရင် တနင့်တပိုး ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတွေက ဆင်းရဲ နွမ်းပါးတဲ့ မဲဆန္ဒရှင်တွေကြောင့် သူတို့အကျိုးစီးပွား တွေ ပျက်လိုပျက်စီးဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တတ်ကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲတွေ မအောင်မြင်အောင်၊ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေ မမှန်မကန်ဖြစ်အောင်၊ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကို သေးသိမ်နိမ့်ကျအောင် လုပ် လာတတ်ကြတယ်။
နောက်တစ်ဖက်မှာကျတော့လည်း ဆင်းရဲ နွမ်းပါးတဲ့သူတွေက သူတို့ဘဝတွေ ချောင်လည်ပြီး ဘဝတက်လမ်း ဖြောင့်တန်းမယ့် အလားအလာမျိုး ကြုံဖို့ ဒီမိုကရေစီနည်းကို အားကိုးလို့ရပါ့မလားဆိုပြီး သံသယတွေ ဝင်လာတတ်ကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အားကိုးတော့လည်း ကိုယ့်ထမင်းတော့ ကိုယ်ရှာစားရ တာပဲ ဘာများထူးလို့လဲဆိုပြီး ဒီမိုကရေစီဘက်က ရပ်တည်အားပေးမှုတွေ ကျဆင်းလာတယ်။ ဒီလိုဖြစ် လာရင် ဒီမိုကရေစီရဲ့ ‘အရည်အသွေး’ ကျဆင်းလာ နိုင်တဲ့အပြင် ဒီမိုကရေစီရဲ့ ‘အရှည်တည်တံ့ရေး’ ကလည်း ရတက်မအေးစရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးကို ကျင့်သုံးတဲ့အခါ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စီးပွားရေး တန်းတူညီမျှမှုရှိဖို့ မလွှဲသာ မရှောင်သာ ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရေစီကို ထိခိုက်လာနိုင် လောက်တဲ့ စီးပွားရေးမညီမျှမှုတွေကို အနည်းဆုံး လျှော့ချဖို့လိုတယ်လို့ ဒီမိုကရက်တွေက စိတ်အား ထက်သန်တတ်ကြပါတယ်။
“ဒီအတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ရွေး ကောက်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်း၊ ကိုယ်စား လှယ်လောင်းတိုင်းက သူတို့ရဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး အသုံးစရိတ်တွေကို အလွန်အကျွံသုံးလို့မရအောင် ဘယ်လောက်ထက် ပိုမသုံးရဘူးလို့ တစ်ပြေးညီ သတ် မှတ်ပေးလိုက်လို့ ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မီဒီယာတွေမှာ မျှမျှတတ ဖော်ပြခံရဖို့နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ ရန်ပုံငွေ တွေ ဘယ်သူ့ဆီက ဘယ်လောက်ယူထားတယ်ဆိုတာ ဖွင့်ချဖော်ပြဖို့ လိုပါတယ်။
“ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း နောက်ထပ်နည်း လမ်းတစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ဆင်းရဲ ချမ်းသာမရွေး နိုင်ငံသားတိုင်းအတွက် ဘဝရဲ့ အခြေခံ အကျဆုံး လိုအပ်ချက်တွေကို တန်းတူညီမျှ ရရှိနိုင်ကြ အောင် စီမံပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာ ရေးတွေ စောင့်ရှောက်ပံ့ပိုးမှုတွေကို နိုင်ငံသားတိုင်း ရရှိနိုင်ကြအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရင် နိုင်ငံသားတိုင်း ဟာ စီးပွားရေးလောက၊ လူမှုလောကတွေမှာ တန်းတူ ညီမျှ ပါဝင်နိုင်လာကြမှပါ။ မျှမျှတတ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြ လာမှာပါ။
ဒီလို အစီအမံတွေ မရှိဘဲနဲ့ဆိုရင် ပညာမတတ်လို့၊ မကျန်းမာ မသန်စွမ်းလို့ စတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့် စီးပွားရေးမှာ တန်းတူညီမျှ မယှဉ်ပြိုင်နိုင်တာတွေ ပိုကြီးမားလာနိုင်ပါတယ်။ (ဒီစပ်ဆက်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးခွန်းနံပါတ် (၂၂) မှာ – စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အခွင့်အရေးတွေကရော ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဘယ်လို စပ်ဆက်သလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေး တယ်။ ဒီလင့်ခ်မှာ http://bit.ly/30FyTyI ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်။)
ဒီတစ်ပတ် တင်ဆက်ဆွေးနွေးမှုကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကို အနှစ်ချုပ် ပြန် တင်ပြရရင်တော့ ….
စီးပွားရေးတန်းတူညီမျှမှုနည်းရင် နိုင်ငံရေးအရ လည်း တန်းတူညီမျှမှု နည်းနိုင်ပါတယ်။
စီးပွားရေးမှာ မညီမျှမှုကြီးမားလာတဲ့အခါ ချမ်းသာတဲ့သူတွေက သူတို့ရဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေ ကို မထိခိုက်အောင် ကာကွယ်ဖို့ ငွေအားကို သုံး နိုင်လာကြသလို၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေက ဒီမို ကရေစီကို ယုံကြည်အားကိုးမှု လျော့နည်းလာ တတ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးမညီမှုကြောင့် ဒီမိုကရေစီမထိခိုက်ဖို့ ဆိုရင် ‘ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ယှဉ်ပြိုင်မှုကို ညီမျှ အောင် လုပ်တာ’ နိုင်ငံသားတွေအတွက် အခြေခံ အကျဆုံး လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးတာ တွေနဲ့ ဖြေရှင်းတတ်ကြတယ် … စတာတွေပါပဲ။
ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းတည်မြဲဖို့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုပေါ် မူတည်သလား
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ် ကူးပြောင်းပြီးခါမှ ခြေချော် လက်ချော်နဲ့ အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုအောက် ပြန် ရောက်သွားတာမျိုး သိပ်ဖြစ်လေ့မရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ် လို့လဲဆိုတော့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ အမူအကျင့်ကောင်း တွေရှိလာပြီး၊ အရပ်သား လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဖွဲ့စည်းထူထောင်ထားနိုင်လာ ကြလို့ပါပဲ။
နိုင်ငံတစ်ခုမှာ လူတွေအားလုံးက စာတတ် ပေတတ်၊ ပညာတတ်ကြမယ်ဆိုရင် အဲဒီနိုင်ငံသား တွေဟာ အကြားအမြင်များ၊ သိမြင်နှံ့စပ်ပြီးတော့ တည်တည်ကြည်ကြည်နဲ့ မဲပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။ နောက်တစ်ချက်က နည်းပညာနဲ့ သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ် ကိုင်နေကြတဲ့ လူလတ်တန်းလွှာတွေများတဲ့ နိုင်ငံတွေ ဆိုရင်လည်း သူတို့ဟာ အာဏာရှင်ဆန်တဲ့၊ ချုပ်ချယ် တတ်တဲ့ အစိုးရတွေကို သည်းခံနေကြမှာ မဟုတ်ပါ ဘူး။
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ လူတွေဟာ ကိုယ့်အစုအဖွဲ့နဲ့ကိုယ် တူရာတူရာ စုဖွဲ့လို့ အရပ်သားအဖွဲ့အစည်းတွေအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြတာ တွေ တွင်ကျယ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို စုဖွဲ့ထားတဲ့ အရပ်သားအဖွဲ့အစည်းတွေ အားကောင်းလေ၊ အစိုးရ က ဟိုနေရာစွက်ဖက် ဒီနေရာဟန့်တား လုပ်တာတွေ ကို ကာကွယ်ပြီး ကိုယ့်အခွင့်အရေးဘက်က ကိုယ်ရပ် တည်နိုင်လာကြပါတယ်။
ဒါတွေကိုဖတ်မိတော့ စာရှုသူအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ထူထောင်နိုင်ဖို့၊ ဒီမိုကရေစီ တည်တံ့ဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံက စီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှသာ ဖြစ်နိုင်မှာပဲ လို့ ထင်မှာပါပဲ။ ဒီလိုတော့ ကောက်ချက်ချ မစောလိုက် ပါနဲ့ဦး။
တကယ်တော့ စီးပွားရေးမကောင်းလှပေမယ့် ဆယ်စုနှစ်တွေချီပြီး ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်ပွဲ တွေကို မပျက်မကွက် ကျင်းပခဲ့တဲ့၊ ဒီမိုကရေစီအတွက် ဇွဲကောင်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေလည်း ကမ္ဘာ့ကုန်းမြေတိုက် ကြီးတွေတိုင်းမှာ ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ – အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဂျာမေကာနိုင်ငံနဲ့ ဘော့စ်ဝါနာ နိုင်ငံတွေပေါ့။ (နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံကို စီးပွားရေးကောင်းမကောင်း တိုင်းတာ တဲ့အခါမှာ အချို့ပညာရှင်တွေက GDP လို့ခေါ်တဲ့ ပြည်တွင်း အသားတင်ထုတ်လုပ်မှု ညွှန်းကိန်းကို သုံးကြပြီး၊ အချို့ကတော့ GNP လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသား အသားတင်ထုတ်လုပ်မှု ညွှန်းကိန်းကို သုံးကြပါတယ်။)
တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီကို ထူထောင်ဖို့၊ တည်မြဲစေဖို့ဆိုရင် အစိုးရတွေအနေနဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမယ့် မူဝါဒတွေအပြင် နိုင်ငံသား တွေရဲ့ ပညာတတ်မှုနှုန်း မြင့်မားလာဖို့ မူဝါဒတွေ ချမှတ်ဖို့ကလည်း ပိုလို့တောင် အရေးကြီးတာပါပဲ။
နဂိုထဲက ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် အတောင်ပံဖြန့်စ အပျံသင်စ ဒီမို ကရေစီနိုင်ငံတွေအတွက်ကတော့ ရေရှည်မှာ စီးပွား ရေးကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ကြရမှာပါ။ စီးပွား ရေးက ဝုန်းဒိုင်းကျဲ မတက်ပေမယ့်လို့ တိုးတက်မှု ခပ်မှန်မှန်လေးရှိတယ်ဆိုရင်တောင် လူ့အဖွဲ့အစည်း ထဲမှာ အဆင်ပြေတဲ့သူက အဆင်မပြေတဲ့သူကို သူတစ် လှည့် ကိုယ်တစ်ပြန် စောင့်ရှောက်သွားလို့ ရပါတယ်။ ပြီးတော့ စီးပွားရေး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အခါ ပဋိပက္ခဖြစ်တာတွေ၊ အချင်းချင်း သူ့ရန်လုပ် ကိုယ့် ရန်လုပ် လုပ်ကြတာတွေလည်း နည်းသွားပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်ခုဟာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု ရှိမရှိ ဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားပြီးသား နိုင်ငံကြီး တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း/အဖွဲ့အစည်း တွေက နိုင်ငံရဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ စီးပွားရေး ညွှန်းကိန်းလို အရေ အတွက်တွေကိုပဲ ကြည့်ပြီးတော့ အကဲဖြတ် တတ် ကြပါတယ်။ ဒီလို အကဲဖြတ်တဲ့ မူဝါဒတွေကြောင့် အကူအညီ ပေးနိုင်လာတာ မျိုး ရှိသလို၊ တခြားဘက်မှာ တော့ အဟန့်အတား အကန့်အသတ် ဖြစ်တတ်တာတွေ လည်း ရှိပါတယ်။
အခုခေတ်ကာလမှာတော့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှု ရှိမရှိ သိနိုင်ဖို့အတွက် ကိန်းဂဏန်းတွေကိုချည်း ကြည့်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံလာကြပါပြီ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ စီးပွားရေး ကဏ္ဍ ဝင်ငွေပမာဏကိုတည်၊ အဲဒီနိုင်ငံက လူဦးရေ ပမာဏနဲ့ စားဆိုပြီး အလွယ်တွက်လို့ ရတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိန်းဂဏန်း တွေ၊ ညွှန်းကိန်းတွေကိုချည်း ကြည့်တာကို အရေအတွက် ရှုထောင့်က သုံးသပ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု ရှိမရှိ သိနိုင်ဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံသားတွေဟာ ကောင်းကောင်း မွန်မွန် နေထိုင်နိုင်ကြရဲ့လား၊ ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိကြ ရဲ့လား၊ ဝင်ငွေရရှိမှုကရော မျှမျှတတရှိကြသလား၊ နိုင်ငံတော်(အစိုးရ)ကရော နိုင်ငံ့ဝင်ငွေကို ကျန်းမာ ရေး၊ ပညာရေးနဲ့ စစ်ဘက်တွေမှာ ဘယ်လို မျှမျှတတ ခွဲဝေအသုံးပြုသလဲ ဆိုတာတွေဟာ ထည့်စဉ်းစားရ မယ့် အချက်တွေ ပါပဲ။ နိုင်ငံ့ဝင်ငွေဟာ နိုင်ငံသား တစ်ဦးချင်း စီအဆင့်မှာ မျှမျှတတ ရှိသလို၊ အစိုးရရဲ့ ဘတ်ဂျတ်က မျှမျှတတ ခွဲဝေသုံးစွဲပါမှ စီးပွား ရေး တိုးတက်မှုကလည်း အဓိပ္ပာယ်ရှိမှာပါပဲ။ ဒါက စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အရေအတွက်အရ မဟုတ်ဘဲ အရည်အသွေးရှုထောင့်က တိုင်းတာစိစစ် တာပါ။
ဒီလို အရည်အသွေးရှုထောင့်ကနေ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို သုံးသပ်ကြည့်ရင် နိုင်ငံတစ်ခုက အစိုးရ ဟာ ဘယ်လို အစိုးရ မျိုးလဲ၊ နိုင်ငံသားပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ် ချက်ကို ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာ ထိ ဂရုတစိုက်ရှိသလဲဆိုတာကိုပါ သုံးသပ် နိုင်လာမှာပါ။
ဒီမိုကရေစီကို လိုလားထောက်ခံတဲ့ မဲဆန္ဒရှင်မှန် သမျှ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှု ကြီးမားစေမယ့် (စားစရာမရှိအောင် ဆင်းရဲတဲ့သူတွေနဲ့ ထားစရာ မရှိအောင် ချမ်းသာတဲ့သူတွေ ပေါ်ထွန်းစေမယ့်) အစွန်းရောက်တဲ့ စီးပွားရေးမူဝါဒမျိုး ရှိစေချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ နိုင်ငံ သားတွေဟာ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေကို ကာကွယ်ရေးတို့၊ လက်တွေ့လူမှုဘဝမှာ သိပ်ပြီး အသုံးမတည့်လှတဲ့ ဝင့်ဝါမော်ြွကားစရာ ကိစ္စမျိုးတို့မှာ သုံးတာထက် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံ တွေအတွက် ပိုလို့ သုံးစွဲစေချင်ကြတာပါပဲ။
ထပ်ပြောရရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိပြီး တာဝန်ခံမှု ရှိတဲ့ အစိုးရတွေဟာ အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ အစိုးရတွေ ထက် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေကို ထိထိရောက်ရောက် သုံးစွဲကြပါတယ်။ အစိုးရတစ်ရပ်ဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှိပြီး တာဝန်ခံတယ်ဆိုရင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် တာတွေ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ယိုယွင်းပျက်စီးတာ တွေ၊ မိုးခေါင်ရေရှားပြီး စားနပ်ရိက္ခာ စိုက်ပျိုးထုတ် လုပ်မှု မပြုနိုင်တာတွေ စတဲ့ ပြဿနာတွေကို နှစ်ရှည် လများ ဖုံးဖိမထားပါဘူး။ ဒီလိုယိုယွင်းမှု အဖုံဖုံကို လက်ခံအသိအမှတ်ပြုပြီး ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်၊ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာ ဖော်ထုတ် ကိုင်တွယ် ကြမှာပါပဲ။ ဒီနည်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရတွေကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် ရေရှည် အာမခံချက် ရရှိစေပါလိမ့်မယ်။
အခုထိ တင်ဆက်ဆွေးနွေးခဲ့တာကို ပြန်ကြည့် ရင် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာရင် ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းတည်တံ့ဖို့ အထောက်အကူပြုသလို၊ ဒီမိုက ရေစီနည်းကျ အစိုးရတွေကို တင်မြှောက်နိုင်လေ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရေရှည် အာမခံချက် ပေးနိုင်လေဖြစ်တာ တွေ့ရမှာပါ။
ဒီမိုကရေစီနဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ ကောင်းမွန်ချောမွေ့တဲ့ နှစ်လမ်းသွား ဆက်ဆံရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဒွန်တွဲနေပါမှ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ၊ ရပိုင် ခွင့်တွေအတွက် စိတ်ချရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ဆက် ရင်း ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ဆွေးနွေးမှုကို အနှစ်ချုပ် ရရင်တော့ ….
စီးပွားရေးတိုးတက်မှုရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ နိုင်ငံသား တွေရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ အမူအကျင့်ကောင်းတွေ ကြောင့် အာဏာရှင်တွေလက်အောက် ပြန် ရောက်သွားဖို့ မလွယ်ဘူး။
စီးပွားရေး ထူးထူးခြားခြား မကောင်းပေမယ့် ဒီမိုကရေစီတည်မြဲအောင် ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံတွေလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ သာဓကတွေ ရှိပါ တယ်။ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို အရေအတွက် ရှုထောင့်နဲ့သာမက အရည်အချင်းရှုထောင့်ကပါ တိုင်းတာသုံးသပ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီကို လိုလားထောက်ခံတဲ့ ပြည်သူတွေ ဟာ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှု ကြီးမားစေမယ့် မူဝါဒမျိုးကို မလိုလားဘူး။ နိုင်ငံ့ဝင်ငွေကို ကျန်း မာရေး၊ ပညာရေး စတာတွေမှာ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချစေချင်ကြတယ်။
ပွင့်လင်းပြီး တာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ အစိုးရတွေဟာ စီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ရှိနေတဲ့ အရင်းခံပြဿနာတွေကို ဖော်ထုတ်ပြီး လူ့အခွင့် အရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကို ဖော်ဆောင်ကြတယ် …. စတဲ့အချက်တွေပါပဲ။